Zavamaniry mihinana | Tantsaha anaty aterneto | November 2019
Sokajy Zavamaniry mihinana
Ny tombony sy ny fanimbana ny choufleur. Afaka mihinana an'io legioma io ve aho amin'ny pancreatitis, gastritis, gout sy aretina hafa?
Ny kesika dia legioma mahavelona sy mahasalama ary mahasalama. Ary raha ny tsangam-bolo tsy natao ho an'ny tsiron'ny olona, ​​dia vitsy dia vitsy no afaka mandà ny lasopy siramamy na kitapo mofomamy miaraka amin'ny cheddar. Ny kamboty dia nahazo ny anarany noho ny tsimokaretiny.
Ahoana no hananana voatabia ao amin'ny saha?
Na inona na inona ny legioma sy ny voankazo tsara tarehy mijery ny trano fivarotana, ny vokatra izay mitombo amin'ny tanany ihany no tena mahafinaritra indrindra. Fantatrao tsara fa ny voankazo dia tsy nampiharina tamin'ny karazana trondro simika ary tsy novolena tamin'ny simika. Noho izany, raha te-hitombo, ohatra, voatabia ao amin'ny saha ianao, dia tsy ho fotoana firy izany.
"Mponina" any avaratra: cucumbers in Siberia
Alohan'ny hividianana zavatra hafa miaraka amin'ireo voankazo mahavelona, ​​mila mandalina amim-pitandremana ireo toetra samihafa ianao. Raha ny marina dia tsy ny kirihitra rehetra no hahatohitra ny toetr'andro any Siberia. Ho an'ny kôkômbra, ity kolontsaina ity dia tia fahazavana sy hafanana be. Saingy ny fambolena maoderina dia nirongatra tsikelikely fa maro be ny karazan'io solontenan'ny fianakaviana croquin io dia efa noforonina, izay afaka manohitra ny fiovan'ny toetry ny toetrandro na dia ao amin'ny faritra tahaka an'i Siberia aza.
Fahagagana ampitan-dranomasina: varim-bazaha varimbariana
Raha toa ianao ka efa niasa tamin'ny cucumbers, dia ny hitady karazana sahaza ho an'ny sainao, dia mety hitanao amin'ny teny hoe "cucumber chine" toy izany. Tsy iray karazana voafaritra izany, fa ny isam-pianakaviana iray manontolo, ny voankazo dia manana endri-javatra anankiroa, izany hoe endrika maivana ary maharitra 50 hatramin'ny 80 cm.
Ural Zelentsy: cucumbers tsara indrindra ho an'i Urals
Amin'izao fotoana izao, karazana kôkôma maromaro, solontenan'ny fianakaviana croquin, dia navotsotra avy amin'ny firenena samihafa. Na ny zokiolona iray manana traikefa nandritra ny taona maro aza tamin'ny fambolena ity voankazo ity dia mety ho tafahitsoka ao amin'io be dia be io. Inona no azontsika lazaina momba ny amam-borona na ireo izay vao nanomboka nikaroka an'io legioma io.
Fivarotan-tsolika boribory: inona izany ary inona no fihinanana azy
Ireo mpamboly sy zaridaina za-draharaha efa za-draharaha izay efa niompy kôkômbra nandritra ny taona maromaro dia azo antoka fa mahafantatra ny kôkômbra. Ny anaran'io vondron'olona samihafa io dia nipoitra noho ny tena endrik'io komity io. Ary io endri-javatra io dia ny fahafahan'ny zavamaniry mamorona amin'ny voay iray mihoatra ny iray na roa oviana miaraka.
Maniry kôkômbra amin'ny varavarankely isika: torohevitra mahasoa
Sarotra izao ny mahita trano izay tsy hisy varavarankely-voninkazo eo amin'ny varavarankely. Mampionona ny trano izy ireo, ary mamorona atmosfera tsara koa. Saingy ny mitombo ao an-trano dia tsy afaka ny dragona, ny violets na dieffenbachia fotsiny ihany. Ho an'ny fambolena toy izany dia mihaingo tsikelikely aza. Tsy fomba fanao sarotra izany, indrindra raha mamboly zavamaniry akanjo ianao mandritra ny taona maro.
Famokarana kôkômbra ny fomba fanatanterahana araka ny tokony ho izy
Ny mpikaroa zaridaina rehetra dia naheno momba ny fomba fitsaboana kôkômbra sy ny tombontsoa azony. Andao hiresaka momba ny fomba fametahana cucumbers eny an-tsaha sy ao amin'ny trano fonenana ary ny antony mahatonga ny kôkôma mila fomba toy izany. Ny fomba fametahana ireo komandy mpihinana bibikely voangom-bibikely antsoina hoe cucumbers, izay tsy miankina amin'ny voan'ny bibikely na ny olombelona ihany ny voany.
Ny fomba hiatrehana ny aretina kôkômbra
Ny mpamboly legioma rehetra dia miatrika aretina sy voka-dratsy avy amin'ny fambolena. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba hanavotana ny kôkômbra amin'ny aretina sy ny bibikely. Matetika, aretina gripa no vokatry ny fikarakarana tsy mety.
Voatabia joma: sakafo tsara indrindra ho an'ny tomaty
Androany, tonta no ankafizin'ny voatabia maneran-tany. Amin'ny toerana izay tsy ampiasaina azy dia tsy ampiasaina, raha vao tsy voajinina. Ity marinadina ity, ary angom-pihinanana, voatabiha, kvass ary vyalyat. Saingy tsy ny olona rehetra no nanandrana ny voankazo vokatra tsara. Cherry Tomato Jam Ingredients: Cherry Tomato - 1 kg Sugar - 450 g Lemon - 1 pc.
Tazomina marinated dia ampahany manan-danja amin'ny sakafontsika. Faly izy ireo mihinana sy amin'ny fialan-tsasatra, ary amin'ny latabatra isan'andro. Ary ny zokiolona be zotom-po rehetra dia manana ny ankafiziny indrindra ho an'ny voatabiha amin'ny ririnina. Ny tsiron'ny voatabia voatahiry dia mety ho hafa - maranitra, mamy, mora. Izany rehetra izany dia miankina amin'ny zava-manitra sy zava-pisotro ho an'ny marinade.
Ny fomba hiatrehana ny fako amin'ny voatabia, ny fitsaboana voatabia amin'ny trano fatoriana
Rehefa nahita famantarana momba ny phytophtoras tao amin'ny tranokalany ireo mpamboly dia nanomboka naneno ny ala. Ao amin'ny lahatsoratra dia hitantara ny zava-drehetra mifandraika amin'ny aretina sy ny fomba hiadiana amin'ny tsimokaretina amin'ny voatabia ao amin'ny trano fivoahana trano sy eny an-tsaha. Inona no atao hoe phytophtora: ny antony sy ny mariky ny aretina Raha tsy mahita ny phytoprotora ianao ary tsy fantatrao ny misy azy, dia mety tsy ho niezaka ny hitombo voatabia ao amin'ny saha ianao.
Ny tsiambaratelon'ny fambolena sy ny fikarakarana zana-katsaka
Ny Tomato dia iray amin'ireo legioma malaza indrindra. Raha tsy misy azy ireo, angamba, dia tsy afaka atao amin'ny tontolon'ny zaridaina. Ny legioma dia tena matsiro, tsara ho an'ny fambolena amin'ny ririnina ary manana zavatra mahasoa maro. Matetika, mividy ny zana-ketsa dia mety ho osa na tsy mifanaraka amin'ny karazana tianao hividianana.
Ahoana no mahasoa ireo tavoahangy serizy?
Tazo kesika dia karazan-tsigara mipoitra tsotsotra, mazàna mena, na dia misy aza ny karazana mavo, maitso ary mainty aza. Ny voankazo dia matetika kely (10-30 g), saingy hita ihany koa ny haben'ny ball golf. Ny endrika dia miovaova avy amin'ny latsa-panafatra kely mankany amin'ny spherical. Ny tomaty dia ampiasaina ho sakafom-bovoka, fanenomana ho an'ny lovia, ankoatra ny salady, voatoto ary na maina aza.
Fomba tsy mahazatra hanangona cucumbers
Maro ny mpikaroka mpangataka no manontany tena hoe ahoana no fomba hambolena ny voankazo sy hazo fihinam-boa ary legioma any amin'ny faritra kely ary miaraka amin'ny fanangonam-bokatra amin'ny vokatra. Manolotra karazana fomba mahaliana hanangonanao cucumbers izahay. Fantatrao ve? Ny tanindrazan'ny kôkômba mahazatra dia faritra tropikaly sy tsy misy dikany ao India, ny tongotry ny Himalayas, izay mbola mitombo hatrany amin'ny toetr'andro.
Fantaro ireo karazana kôkômbia tsara indrindra ho an'ny balkonina
Azonao atao ny manandrana kôkômbôla mahafatifaty mahavelona ao an-trano na dia tsy manana teti-tany na dacha aza ilay trano. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny hany famonjena dia ny karazana kokombolo ho an'ny balcony, ny famaritana ny malaza indrindra izay hataontsika manaraka. Avril Ity karazana vary ity dia mihamatotra, izay ahafahana mahita eo amin'ny kirihitr'io zavamaniry io ny ovarea voankazo ao anatin'ny 1.5 volana aorian'ny fipoahana.
Ahoana no fomba hananganana voatabia amin'ny hydroponics
Ny hydroponics dia teknôlôjia izay ahazoana zavamaniry tsy ampiasana tany. Ny fitrandrahana ny fakany dia miteraka tontolo iainana. Izy io dia mety ho ny rivotra mando, ny rano mafana, ary ny mafy (porosaina, ny fahamendrehana sy ny rivotra mandevona). Amin'ny alalan'io fomba io dia mitaky matetika ny fitrandrahana rano na tsy tapaka amin'ny fampiasana vahaolana miasa ho an'ny mineraly, ny endrik'izany dia miankina amin'ny filan'ny zavamaniry iray manokana.
Ahoana no hananana cucumbers amin'ny varavarankely amin'ny ririnina
Sakamalao eo am-baravarankely amin'ny ririnina - tsy angano intsony izany, fa ny zava-misy, izay nokarakarain'ny mpikarakara zaridaina tao an-tranony. Azo atao ihany anefa izany rehefa mampiasa karazana kôkôma manokana ny fitomboan'ny ririnina amin'ny trano ririnina ary manaraka ny fitsipika rehetra hikarakarana azy ireo. Varimbazaha kôkômbra amin'ny sisin'ny varavarankely Noho ny asa goavana ataon'ny mpamboly anio, ny mpamboly legioma rehetra dia afaka mividy masomboly kômera izay afaka mitombo sy mamokatra na dia eny amin'ny toeram-pivoahana aza.
Ny fomba hikarakarana tsara ny zavamaniry melotriya na ny cucumber mini
Metôtria dia zavamaniry avy any Afrika, avy any Afrika, manana voankazo voajanahary izy ary mihamaro hatrany hatrany eo amin'ny latabatra misy antsika amin'ireo tia kolontsaina faran'izay tsara. Vovon-tsakafo mineraly: ny famaritana ny zavamaniry Melodia dia ny vatomamy, miaraka amin'ny voankazo mamy sy legioma. Ny zavamaniry dia misy liana toy ny tongotra maherin'ny telo metatra, ny ravina dia mitovy amin'ny kôkômbra, triangular amin'ny endrika miaraka amin'ny sisiny maranitra, fa tsy misy kôkôgrafia kôkôma.
Fikajiana ny fambolena voninkazo: inona no hambolena aorian'izay, ahoana no fomba handaminana ny vokatra araka ny tokony ho izy
Ny mponin'ny fahavaratra dia mahatsapa tsara fa raha toa izy ireo mandritra ny taona maromaro isan-karazany dia mamolaka ireo vokatra mitovy amin'ny toerana iray ihany, ary na dia amin'ny toe-javatra toy ny fikarakarana azy aza dia lasa malemy kokoa isan-taona ary miharatsy ny voankazo. Io trangan-javatra io dia vokatry ny famongorana ny tany, izay, noho ny antony maro samihafa.
Fomba hiarovana ny kôkôma amin'ny ririnina: ahoana no fomba hihazonana ny komandy vaovao
Ny voankazo voankazo misy voankazo miaraka amin'ny vitaminina feno dia hihoatra ny safidy. Indrisy anefa, amin'ny fikojakojana tsy mety, dia manomboka haingana ny kikopera. Ny hany fomba azo atao dia ny mihinana legioma haingana araka izay azo atao raha mbola vaovao izy ireo, na hahita fomba vaovao hitehirizana azy ireo.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Zavamaniry mihinana